Fariin daliil kale oo weyn oo ugu yeeray, gaar ahaan haddii aad tahay nooca qofka Cunid diinta fekerkaaga, fikrado iyo dareen in erayada halkii higaada baxay. Bal qiyaas waxa ku dhalato waxay noqon kartaa haddii aad jeclaan mucaaradka iPhone arrintan la xiriira. Wax macno ah ma in aad bixin qoraal ah oo fudud ama idinku soo diro via iMessages ama arrintan, helaan una dir fariin ka helay dadka isticmaala aan iPhone. Dadka intooda badan u muuqdaan in ay la kulma dhibaato lahayn oo la yara Fariin ku iPhone ay ka iyo in dhab ahaan ma gelin aan kor sawir wanaagsan ee Apple hor macaamiisha la filayo.
Tassna u sheegay, mararka qaar dhibaatada loo saarin karaa in arrimaha software halka dhawr dhacdooyin kale, waa server dib-dhamaadka Apple ee beenta ee asalka ah. Haddii aad tahay mid ka mid ah dhibanaha oo kale ayaa dagaal la xaaladaha xun ee la xidhiidha fariimaha iPhone, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad isku daydo wax yar ka dhalato. Ma aha in lagu dhiso doono arimaha la si degdeg ah, laakiin hubaal bixiyaan wixii joogsadeen qaar ka mid ah.
• iPhone ma soo diri kartaa fariimaha ka iPhone / qalabka Android
Haddii aadan awoodin inaad u soo dirto ama aad u hesho SMS ama farriin qoraal ah ka user kale oo iPhone, waa suurto gal, maxaa yeelay, doorasho iMessage ah ayaa la isticmaalay. Sababta sababta kiisaska noocaas ah dhacaan waxaa ugu wacan in aad wareejin kaarka SIM ama lambarka taleefanka si kasta oo aan Apple telefoonka (tusaale ahaan, Android ama Blackberry). Waxaad u baahan tahay in aad barkinta iMessage doorasho ka hor bedesheen on qaar kale oo telefoon aan Apple. Isla marka aad samayn in, wax ay noqon karaan tad a fudud. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad weli naftaada ka heli dhamaadka ismariyaan ee, diiwaan gelin fursad u iMessage oo aan aragnaa waxa dhaca.
• iPhone ma heli kartaa fariimaha ka iPhone / qalabka Android
La mid ah dhibaatada, dib u dhac hore ama guul darro lagu soo farriimo ka helaan iPhone ama Android telefoonada waxay dhici kartaa marka ikhtiyaarka iMessages waxaa lagu hayaa. Isku day in aad barkinta in ka telefoonka si ay awood xarunta qoraalka. Mid ka mid ah wax la yaab leh oo ku saabsan iMessages waa in adeega ay u baahan tahay in ay gabi ahaanba la demiyo. Users Dad badan ayaa ka cawday arrintan iyo Apple ayaa haatan sii daayay qalab adeeg oo caawinaya barkinta iMessages ka browser isticmaalaya ID Apple ah. Haddii kale, waxaad u tagi kartaa app goobaha iyo demi iMessages ah.
• iPhone ma soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah in dadka isticmaala aan iPhone
Diritaanka farriimaha noqon kartaa wax badan ee mashaqadan ah u isticmaala iPhone dadka kale ma lahaanshaha isku mid. Sida ugu badan ee hubinta iMessages waa arrin muhiim ah, in aad sidoo kale isku dayi kartaa waxyaabo kale oo yar. Isku day inaad abuurtaan App Settings ku iPhone. Tubada on gacanta, awood LTE oo ka jaftaa xogta kaliya. Ka dib markii in, aad reboot kartaa telefoonka. Tani waxay ka shaqaysaa ganaax kiisaska ugu badan. Waxa kale oo keena dhibaatada ka haysato cinwaanada emailka ku qoran oo ah qaab ku diraan / helaan fursadaha in iMessage. Waxaad isku dayi kartaa curyaamo dambe iyo qoraalka. Lambarka telefoonka waxaa lagu hubin doonaa iyadoo farriin ah in ka dib. Soo tago, kuwaas oo, isku day in howleheedii aad telefoon iyo network goobaha haddii taas oo ka caawisa. Weli wanaagsan, tagto update ah oo aad ka heli karo wax noqon doonaan siman mar kale.
• iPhone ma soo diri kartaa / helaan iMessages
Tani waxay la mid tahay sida aad u kala soocaa arrinta in meesha ugu horeysa. Maamul iMessages doorasho mar kale iyo haddii ay suurtogal tahay, u tag, waayo, qoraalkii ugu dambeeyey ee fariimaha u OS X caawin kara feature cusub kuu oggolaadaan in aad soo dirto oo aad hesho farriimo SMS text sidoo kale. Kani waa geedi socod kacaanyahan ah oo uu ku haboon kooxaha badan. Xitaa samaynta SMS Relay waa u fududahay laakiin waa kaliya u qabtay qaar ka mid ah shuruudaha hardware iyo software oo ay tahay in la buuxiyo. Messages waa in la qaybiyay on Mac, iPhone waa in uu ahaado mid ah nooca ugu dambeeya haddii ay suuragal tahay oo isla iCloud isticmaalo sida Mac iyo feature qoraalka ah waa in karti loo on iPhone si loo xaqiijiyo on Mac dhex app Fariimaha.
• iPhone ma lifaaqa soo diri kartaa
Waa wax ka mid ah dadka caadiga ah si aad u aragto in marka la isku dayayo in aad u aragto lifaaqa ah, bandhigay waa sax ahayn ama marka gudbinta fariin gaar ah lifaaqa uusan si fiican u muujiyaan in qaatuhu. Waxaad rogto karto hoos hoose ee Quraanka oo guji download si aad u eegto lifaaqa ka dibna fariin u gudbinayaan.
Inkasta oo ay jiraan ogaaaday ee arrimaha saameeya freaks SMS, sii arrimahaasi waxay ku hay waaba intaasoo aad u baahan tahay si ay kula dagaalamaan arrimaha.
> Resource > iPhone > iPhone SMS Dhibaatooyinka: Sida loo dayactir Waxaa